Ahoana no amboary ny ecran pc fa lehibe loatra? - LifeBytes | LifeBytes
Ahoana no amboary ny ecran pc fa lehibe loatra? Fanontaniana tena angatahina izany. Fa amin'ny ankapobeny dia olana amin'ny efijery, rehefa ny kisary sy ny varavarankely ao amin'ny pc miseho lehibe kokoa ary mihoatra ny haben'ny Monitor azo atao ny mampihena azy ireo ary mametraka azy ireo amin'ny habeny mahazatra.
Ny famahana ity olana ity dia tena tsotra, ovao fotsiny ny efijery, azontsika lazaina toy izao: ny sandan'ny famahana ny efijery dia mifanohitra amin'ny haben'ny sary ao anaty Monitor, izany hoe, amin'ny teny hafa, dia avo kokoa ny soatoavina amin'ny famahana ny efijery ny kely kokoa dia hijerena ireo sary. Ny fomba fanovana azy ireo dia miankina amin'ny Operating System ampiasaina.
1 Dingana tokony harahina hanamboarana ny famahana ny efijery ao amin'ny Windows 7
1.1 Azonao atao koa ny manova ny haben'ny sary masina
2 Fomba fanao amin'ny Mac
Dingana tokony harahina hanamboarana ny famahana ny efijery ao amin'ny Windows 7
Tsindrio ny bokotra havanana amin'ny faritra tsy sarona ao amin'ny birao pc. Mifidiana "Properties".
Mandehana any amin'ny fanontana indray "Fametrahana", tsindrio ilay fanambarana "Fananana aseho".
Slide ny fifehezana ny fanambarana "Resolution an-tsary" ankavanana. Araka ny efa nolazainay, ny ambony ny vahaolana, ny kely kokoa ny haben'ny sary masina.
Press «aplicar»Rehefa misafidy ny fametrahana vahaolana vaovao.
Manana safidy hijerena ny efijery ianao. Azonao atao ny manamarina ny fanekenao amin'ny alàlan'ny fanindriana "Eny" tao anaty boaty kely iray dia nilaza hoe “Fanaraha-maso fanomanana”Ary avy eo manindry "Manaiky". Ity fandidiana ity dia azo atao isaky ny fotoana tadiavinao.
Azonao atao koa ny manova ny haben'ny sary masina
Tsy maintsy miditra amin'ny biraonao ny solosainao.
Tsindrio havanana eo amin'ny birao
Misafidy "View" ianao ary misafidy ny haben'ny kisary tianao
Fomba fanao amin'ny Mac
Amin'ny ordinatera Mac ny vahaolana amin'ny efijery dia mifehy ny habetsaky ny fampahalalana azo aseho miaraka amin'ny monitor. Ny fitsipika mitovy dia miasa toy ny ao amin'ny pc inona no ampiasain'izy ireo Windows ny ambony ny vahaolana, ny kely kokoa ny singa miseho ao amin'ny efijery ary ny vokatra mifanohitra amin'izany dia hamboarina rehefa mampidina ny fihenan'ny sanda voalaza.
Mazava ho azy fa miankina amin'izay mampiasa ny solosainaRaharaha tiana io, izay manana kilema hita maso dia aleony miasa miaraka amin'ireo singa lehibe kokoa noho ny tanjon'ny endrika tsy dia fahita firy ary amin'izany dia afaka mahita azy ireo tsara kokoa. Ilay Serie Mac OS manana ny fifehezan'i vahaolana namboarina mba hahitsy haingana kokoa ny famahana ny efijery.
Ny fomba fanao amin'ny solosaina Mac dia toy izao manaraka izao:
Safidio ny sary famantarana Apple hita eo ankavanan'ny efijery.
Tsindrio ilay fanambarana "System preferences", avy eo misafidy "Screens".
Tsindrio ilay fanambarana "Screen" raha mbola tsy voafidy.
Misafidiana iray vahaolana izay misy ao amin'ny lisitry ny Fanapahan-kevitra avy amin'ny lisitry ny Fanapahan-kevitra fitaovana. Fantatray fa ny vahaolana amin'ny efijery fampiasa matetika dia ny 1280 X 1024 ho an'ny fampisehoana manara-penitra sy 1280 X 800 niresaka tamin'i efijery karazana panoramic. Amin'ny solosaina Mac OS X ny fikirakirana vaovao dia miasa avy hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » tambajotra » Ahoana ny fanamboarana ny efijery pc-ko be loatra?
Ahoana ny fanamboarana finday lena
Jereo ny momba ny Freedompop ao Meksika